1. နယျခွားတဈခှငျ ခရီးရှညျ လှညျ့လညျခဲ့စဉျက အသကျကယျသညျ့ အူလိုငျပငျ - ယိမျးနှဲ့ပါး
eBook file size: 77.6 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၃ ခုနှဈ၊ မလေ၊ အမှတျ ၂၄ ထုတျ ပဖေူးလှာမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- မရှောစီ ခေါ်သည့် မသေဆေးပင် - ယိမ်းနွဲ့ပါး ...
... အခမ်း အဆောင်အယောင်၊ အသုံးအဆောင်။ အခေါက်ထူ လူမိုက်=မလိမ္မာသောသူ။ အခေါင် ကြငှန်း=အထွဋ်-အဖျား။ အမြတ်။ အခိုးတံ ဆေးတံ၊ "အခိုးတံမူ၊ မြဲမြံထွာလောက်" (ရွှေဟင်္သာမင်းပျို့)။ အခွန် သင်းချိုင်းမှတပါး ...
4. မွပေဒသောကြှနျး သမိုငျးအစ - ခရမျးကြျောနိုငျဦး
5. Adventure in Burma - Gordon segrave buildsahospital told in pictures
eBook file size: 18.2 MB ebook pages: 72 Publication: Judson Press, 1944, reprrinted in USA, 1945. (ဒေါက်တာဆီးဂရေ့စ်မှ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ရှိ ဆေးရုံကို တည်ထောင်သွားခဲ့ပုံအကြောင်း ရုပ်ပုံကားချပ်များနှင့်ရှင်းပြထားသော ...
7. ပျောက်ကွယ်လု မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများ - ဒဂုဏ်ထွန်း
eBook file size: 69.3 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အမှတ်(၁၅)ထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ...
8. အလှပန်းတို့ ဝေစည် ရှမ်းအရှေ့ပြည် - တောင်တွင်းဘိုသိန်း
... ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဖမ်းဆီးရမိ မူးယစ်ဆေးများ ကျိုင်းတုံတွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုမြင်ကွင်း လှူကြ တန်းကြ မြတ်ဒါန တိုးချဲ့တည်ဆောက်နေသော ကျိုင်းတုံလေယာဉ်ကွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ...
9. မုံးမြိတ်၊ ဆင်လီ ကချင်ဆပ်စတိတ်သမိုင်း
... Hill Tracts တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ရဲတပ်ကြပ်ကြီးများ (ခ)ကိုးတောင်ဆပ်စတိတ်ဖြစ်ပေါ် လာခြင်း (ဂ)ပြည်သူလူထု၏သဘောတူညီမှု (ဃ)တောင်တန်းဒေသသားများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် မေမြို့ (င)စာသင်ကျောင်းများ (စ)ကိုးတောင်ကောင်စီရုံးမြေနေရာအကြောင်း ...
10. ဆေးဝါးပငျမြား အဘိဓာနျ (မွနျမာ၊ ရုက်ခဗဒေ၊ အင်ျဂလိပျ၊ ဟိန်ဒီ၊ ပါဠိ၊ တက်ကတ၊ ကခငျြ၊ ကရငျ၊ ခငျြး၊ မှနျနှငျ့သြှမျးအမညျမြား)
eBook file size: 39.4 MB ebook pages: 248 Publication: maungpauk.org မှ ရရှိပါသညျ။ Download Related Articles မရှောစီ ခေါ်သည့် မသေဆေးပင် - ယိမ်းနွဲ့ပါး မြန်မာ့ဆေးပညာ - ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ...
11. မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် - စိုင်းသီဟ
12. မင်းကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားစီရင်တော်မူအပ်သော ၀ိပဿနာနယဒီပနီကျမ်း
13. မွနျမာ့ဆေးပညာ အထငျမသေးရာ - သင်ျခါ
eBook file size: 53.0 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈ဝ ခု၊ ဖဖေျေါဝါရီထုတျ မွဝတီမဂ်ဂဇငျး။ Download Related Articles ဆေးပညာ ...
14. မြန်မာ့ရိုးရာ အမွေအနှစ် ရှေးဟောင်း ပေစာ ပုရပိုက်စာ - ဦးမြတ်ကျော်
... ရှမ်းပေစာဟောင်း ထူးခြားသော ဂါထာတစ်ပုဒ် ꨀျꨤမ်းလေုးꨀီꨲ မိူဝ်ꨳꨀွꨓ်ꨲ တꨯး-မꨤꨓ်ꨳ-ပုꨲလိ ꨕုꨲသုꨲ(꨾)မꨱဝ်း လွင်ꨳ ꨀုꨲမသျတ်ꨵတြꨀျꨤမ်း ꨬလꨳ လွင်ꨳယု - ရှမ်း-မြန်မာ-ပါဠိ (၃)ဘာသာ ကာမသျှတ္တရကျမ်း နှင့် ဆေးကျမ်း ꨀျꨤမ်းထမ်ꨲမရုꨲသီꨲ ...
15. မရှောစီ ခေါ်သည့် မသေဆေးပင် - ယိမ်းနွဲ့ပါး
eBook file size: 96.7 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၂-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ယိမ်းနွဲ့ပါး၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ...
16. တꨯး-မꨤꨓ်ꨳ-ပုꨲလိ ꨕုꨲသုꨲ(꨾)မꨱဝ်း လွင်ꨳ ꨀုꨲမသျတ်ꨵတြꨀျꨤမ်း ꨬလꨳ လွင်ꨳယု - ရှမ်း-မြန်မာ-ပါဠိ (၃)ဘာသာ ကာမသျှတ္တရကျမ်း နှင့် ဆေးကျမ်း
eBook file size: 11 MB ebook pages: 111 Publication: ? download